Isony Electronics Iphehlelela isongezo esitsha kuG G Master ™ Isakhelo esipheleleyo seLens ngeLightweight kunye neCompact 35mm F1.4 G Master ™ | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » Ukudalwa kokuqukethwe » Isony Electronics Iphehlelela isongezo esitsha ku-G Master ™ Isakhelo seLens esipheleleyo seLightweight kunye neCompact 35mm F1.4 G Master ™
Sony Electronics Inc. namhlanje ibhengeze i-FE 35mm I-F1.4 GM (imodeli ye-SEL35F14GM) -olona hlobo lutsha ludwelisiweyo kwi-G Master ye-lens-full-frame lens series- ukuhambisa umgangatho weklasi yokuqala kunye ne-bokeh entle kuyilo oluhambelanayo kunye nolula. Xa ubhangqiwe nomzimba wekhamera ye-E, iilensi ezinikezelayo SonyUmzi-mveliso okhokelayo we-AF (i-autofocus) -ulungele uluhlu olubanzi lwezinto ezisetyenziswayo ezinje ngemihlaba yokudubula, iifoto zemifanekiso kunye nokufota esitalatweni, kuzo zombini iiseti kunye nevidiyo.
"Ku Sony, Injongo yethu kukuzalisa umhlaba ngeemvakalelo ngamandla obuchule kunye netekhnoloji ke siyile i-FE 35mm F1.4 GM ukubamba ngokukuko amaxesha afuna ukusindiswa ngonaphakade, utshilo uNeal Manowitz, usekela mongameli weImaging Products and Solutions Americas Sony Izixhobo zombane. "Ngesisombululo esigqibeleleyo kunye netekhnoloji egxile kubukrelekrele, konke kuyilo oluncinci, olunobunzima, le ilensi ebalulekileyo engenakuphazamisa umgangatho womfanekiso."
Isigqibo esigqibeleleyo kwiLense eyiCompact
SonyUyilo olwenziweyo oluphambili kunye netekhnoloji yokuvelisa izisa isisombululo esingaqhelekanga, i-bokeh entle, kunye nokusebenza ngokuchanekileyo kokujongwa kwilensi ehambelana kakuhle entendeni yesandla sakho, inobunzima nje bee-ounces ezili-18.5 (524 iigrem) kunye nokulinganisa ii-intshi ezintathu ze-dia. x 3 ⅞ intshi (3 mm dia. x 76 mm) enobubanzi becebo lokucoca ulusu Φ96mm. I-FE 35mm I-F1.4 GM inezobuchwephesha bobuchwephesha obuphambili obuzisa umahluko omangalisayo kunye nesisombululo esihle. Izinto ezimbini ze-XA (aspherical) ezigcina ngokufanelekileyo zisombulula isisombululo kwindawo yonke yomfanekiso. Enkosi ngento yeglasi ye-ED kunye nolunye uhlengahlengiso lwe-optical, i-FE entsha 35mm I-F1.4 GM isebenza kakuhle ekukhanyeni okunzima ngokucindezela ngokufanelekileyo i-chromatic aberration kunye ne-purple fringing kwiziphumo ezimangalisayo.
I-FE 35mm I-F1.4 GM ihambisa phantse isetyhula ngombulelo kulwakhiwo lwayo lwe-11-inqanaba elinqabileyo lomgangatho welensi yecompact. Ukulawulwa kokuphambuka okungafaniyo kuyilo kunye nakwinqanaba lokuvelisa kunegalelo kwi-bokeh entle-uphawu lwesiginitsha SonyUluhlu lweelensi zeG Master.
Izinto ezimbini ezintsha ze-XA zinegalelo ekusondeleni okumangalisayo nge-bokeh yangasemva egudileyo. Ukudityaniswa kokuvulwa okuphezulu kwe-F1.4 kunye nokuguquguquka kokukhetha umgama ogqibeleleyo wokudubula (ubuncinci bokugxila kumgama we-intshi ezingama-10.6 (27cm) ngobukhulu obuphezulu be-0.23x kwimowudi ye-autofocus) ivumela ulawulo lokugqibela kunye ne-bokeh emangazayo xa kudutyulwa zombini kunye nevidiyo.
Ukugxila phambili kumfanekiso ophuculweyo
Ezimbini ze SonyIi-XD (eziguquguqukayo) I-Linear Motors zibonelela ngokusebenza okuphezulu kwe-AF (i-autofocus) kunye nokulandela umkhondo-kukhokelela kwisisombululo esivelele kuwo nawuphi na umgama. I-state-of-the-art control algorithms, ephuhliswe ngokukodwa kwi-XD Linear Motors, iphucula impendulo yolawulo kunye nokuchaneka ngelixa kuncitshiswa ukungcangcazela nengxolo yokusebenza kwe-AF okukhawulezayo, egudileyo kunye nokuthe cwaka.
Ukugxila phambili kuya kufezekiswa xa kudutyulwa kwinqanaba eliphezulu lesakhelo.
Ukuphendula okuMgca MF kuqinisekisa ukuba umsesane wokujolisa uphendula kulawulo olufihlakeleyo xa ugxile ngesandla kwaye ulungile kwiziphumo zokugxila kuyilo xa kusenziwa ividiyo. Ujikeleziso lwesangqa esiguqula ngokuthe ngqo kutshintsho oluhambelanayo kugxilwe, ke ulawulo luziva kwangoko kwaye luchanekile.
Ulawulo lobungcali kunye nokuthembeka
I-FE 35mm I-F1.4 GM ibonelela ngolawulo olupheleleyo lobuchwephesha kubandakanya umsesane wokuvula onendawo ezinokucofa ezinokutshintshwa, iqhosha lokubamba elinokubakho kunye nokutshintsha kwemowudi ekugxilwe kuyo exhasa ukusebenza okuthe tye, okusebenzayo Iqhosha lokubamba ekugxilwe kulo linokunikezelwa kweminye imisebenzi emininzi ngemenyu yomzimba wekhamera, ukubonelela ngokuthe ngqo kwimisebenzi ebalulekileyo kubo bobabini abafoti kunye nabafoti.
Xa ifakwe kwikhamera ye-APS-C okanye ye-Super 35, i-compact kunye ne-FE engasindi 35mm I-F1.4 GM inokusetyenziswa njengeelensi esemgangathweni elingana ne-52.5mm yeefreyimu ezizeleyo zesakhelo esilinganayo, esenza ukuba ibe lukhetho olufanelekileyo lokudala iividiyo. Izibonelelo ezongezelelekileyo zevidiyo zibandakanya ukuvula okucofwayo, i-AF ekhawulezayo yomgama kunye nokugxila kwempendulo yomgama.
I-FE 35mm I-F1.4 GM inezinto ezinokunganyangeki ngothuli kunye nokufuma[i] uyilo kunye nefluorine yangaphambili yento yokutyabeka egxotha amanzi, ioyile kunye nezinye izinto ezingcolisayo.
IFE entsha 35mm I-F1.4 GM iya kufumaneka ngoFebruwari kwaye iya kuthengiswa malunga ne- $ 1,399.99 USD kunye ne- $ 1,899.99 CAD. Iya kuthengiswa ngeendlela ezahlukeneyo ze SonyAbathengisi abagunyazisiweyo kuMntla Merika.
Amabali awodwa kunye nomxholo omtsha onomdla odutyulwe ngelensi entsha kunye SonyEzinye iimveliso zentelekiso zifumaneka kwi www.blueoftmedia.com, indawo eyenzelwe ukufundisa kunye nokukhuthaza bonke abalandeli kunye nabathengi be Sony α-Uphawu lweAlfa.
Umxholo omtsha uya kuthunyelwa ngqo kwi Sony Ifoto Ithala lemifanekiso. Ngolwazi oluthe kratya ngemveliso, nceda undwendwele:
(EUS) - FE 35mm F1.4 GM
Ividiyo yemveliso kwi-FE entsha 35mm F1.4 GM inokujongwa APHA.
malunga Sony Elektroniki Inc.
Sony Electronics yinkxaso ye Sony IQumrhu laseMelika kunye nenxalenye ye Sony Inkampani (eJapan), yenye yeenkampani zokuzonwabisa ezipheleleyo kwihlabathi, enephothifoliyo ebandakanya izinto ze-elektroniki, umculo, imifanekiso eshukumayo, iselfowuni, imidlalo yokudlala, iirobhothi kunye neenkonzo zezemali. Ikomkhulu eSan Diego, California, Sony I-elektroniki iyinkokeli ye-elektroniki yabathengi kunye neemarike zobungcali. Imisebenzi ibandakanya uphando kunye nophuhliso, ubunjineli, ukuthengisa, ukuthengisa, ukuhambisa kunye nenkonzo yabathengi. Sony Izinto ze-elektroniki zenza iimveliso ezivuselela kwaye zikhuthaze izizukulwana, ezinje ngeekhamera zeeLens eziTshintshisanayo zeAlfa kunye neemveliso zomsindo ezinesisombululo esiphakamileyo. Sony ikwangumvelisi ophambili wezisombululo zokuphela kokuphela ezivela kusasazo lobuchwephesha lwe-4K kunye nezixhobo ze-A / V kumzi mveliso okhokela i4K kunye ne8K Ultra HD IiTV. Tyelela www.sony.com/news ufuna ulwazi olungolunye.
[i] Akuqinisekiswanga ukuba yi-100% yothuli kwaye ayinamanzi.
Previous: I-NDR yaseJamani idibanisa i-CGI's StudioDirector 2.0 ye Studio entsha eHamburg
next: U-Aviteng ujoyina amaCinegy AŞ amaQabane oShishino